विद्यार्थी वृद्धि चार वर्ष भित्र अ measures्ग्रेजी / भाषा कला र गणित शैक्षिक मापदण्डहरु को कुशल हुन, वा प्रवीणता कायम गर्न को लक्ष्य मा छन् कि छ कि विद्यार्थी माप। विद्यार्थी वृद्धि पर्सेन्टाइलहरू (SGPs) यो निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ कि विद्यार्थीहरूले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न वार्षिक बृद्धि गर्दैछन्। SGPs ले विद्यार्थीको उस्तै प्रदर्शन ईतिहास साझा गर्ने अन्य विद्यार्थीहरूको तुलनामा विद्यार्थीको शिक्षालाई वर्णन गर्दछ, वा विद्यार्थीको &#39;शैक्षिक साथीहरू।&#39; केवल दुई लगातार मूल्यांकन परिणामको साथ विद्यार्थीहरू जो स्कूलमा भर्ना गरिएको स्कूल वर्षको अधिकांश खर्च गर्छन् विद्यार्थीको वृद्धि रिपोर्ट गर्दा समावेश गरिएको हुन्छ। (डाटा स्रोत: २०१-201-२०१ school स्कूल वर्ष)
यस कर्पोरेसनमा विद्यार्थीहरूको कुन प्रतिशतले उनीहरूको वार्षिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गरे वा बढ्यो?
विद्यार्थी वृद्धि माप लिन्छ कि विद्यार्थीहरू दक्ष हुन वा अंग्रेजी / भाषा कला र गणित मापदण्डको दक्षता कायम गर्ने लक्ष्यमा छन्।
अंग्रेजी / भाषा कला
राज्य औसत 52.3%
राज्य औसत 62.4%
अंग्रेजी / भाषा कला ग्रेड १०
सबै भन्दा कम प्रदर्शन २ 25% विद्यार्थीको ग्रेड -।
राज्य औसत 33.6%
अंग्रेजी / भाषा कला सबै भन्दा कम प्रदर्शन २ 25% विद्यार्थीको ग्रेड -।
राज्य औसत 35.7%
न्यूनतम प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूको ग्रेड 3-8 का 25%
राज्य औसत 17.1%
गणित न्यूनतम प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूको ग्रेड 3-8 का 25%
यस संस्थानमा विद्यार्थीहरूले अंग्रेजी / भाषा कला र गणित वृद्धिको लागि राज्यको अन्तरिम लक्ष्यहरूको तुलनामा कसरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्?
अन्तरिम लक्ष्यहरूले प्रवीणतातिर बढ्न राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अपेक्षित प्रगतिलाई जनाउँछ।
यस कर्पोरेसनमा विद्यार्थीहरूको औसत वृद्धि प्रतिशतक के हो?
विद्यार्थी विकास पर्सेन्टाइलले शैक्षिक उपलब्धिहरूको समान ईतिहासको साथ अन्य विद्यार्थीहरूको तुलनामा एक वर्षमा शैक्षिक प्रगति विद्यार्थीहरूको मात्रा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
अ /्ग्रेजी / भाषा कला मेडियन ग्रोथ पर्सेन्टाइल ग्रेड -।
अ /्ग्रेजी / भाषा कला माध्यमिक वृद्धि पर्सेन्टाइल ग्रेड १०
गणित माध्यमिक ग्रोथ पर्सेन्टाइल ग्रेड -।
गणित मेडिया ग्रोथ पर्सेन्टाइल ग्रेड १०